UNHCR oo walaac ka muujisay Cuno Yari soo wajahaysa Qaxootiga Kenya ku nool - iftineducation.com
UNHCR oo walaac ka muujisay Cuno Yari soo wajahaysa Qaxootiga Kenya ku nool
aadan21 / November 25, 2014
iftineducation.com – Hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR ayaa ka hadashay cuno yari soo wajahaysa Qaxootiga afrikaanka ee ku nool xerayaha Qaxootiga Kenya sida Dhadhaab iyo Kaakuma.
Warka soo baxay Madaxa u qaabilsan UNHCR dalka Kenya Raouf Mazou ayaa lagu sheegay in hay’adaha WFP iyo UNHCR ay hoos u dhigeen cuntadii ay siin jireen qaxootiga ku nool xeryaha Kenya ka dib markii hoos dhac ku yimid taageeradii ay ka heli jireen hay’adaha caalamiga iyo dowladdaha deeqbixiyaasha.
Raouf Mazou waxa uu warkiisa ku cadeeyey in ay hay’adahan dadaal ugu jiraan sidii cunto loogu heli lahaa dadka ku nool xeryaha Qaxootiga Dhadhaab iyo Kaakuma oo ay ku nool yihiin ku dhawaan Hal miyan oo qaxooti ah kana soo kala jeeda dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo South Sudaan.
Qaxootiga Soomaalida ee ku nool xerayaha Kenya ayaa lagu qiyaasa in ay yihiin 500,000 qof sanadihii u dambeeyeyna lagu waday qorsho lagu dhimayo dibna loogu celinaya dalkooda, Balse warbixintan ayaa qayb ka mida lagu sheegay in cunto yarida ay sameeyeen hay’adaha WFP iyo UNHCR aysan ka mid ahayn qorshaha dib u celinta Soomaalida.
23 Sano xeryaha Kenya waxaa ku noolaa qoysas Soomaali ah oo ka cararay dagaaladii dalka iskaga kala dambeeyey waxaan sanadihii dambe ay wadeen dowladdaha Kenya, Somalia iyo UNHCR qorsha dadkaas dib loogu celinayo dalkooda.
Niinkii aduunka ugu nasiibka badnaa oo la shaaciyay magaciisa
Film anshax xumo ah oo soomaali soo jisay lisku riix riixaayo baashaal dhuuqmo wato